သင်္ဃန်းကျွန်းက Foodie တို့အတက် နှစ်ခါစဉ်းစားစရာမလိုအောင်သွားစားကြည့်သင့်တဲ့ဆိုင်လေးများ – LOOFY
Home › Uncategorized › သင်္ဃန်းကျွန်းက Foodie တို့အတက် နှစ်ခါစဉ်းစားစရာမလိုအောင်သွားစားကြည့်သင့်တဲ့ဆိုင်လေးများ
သင်္ဃန်းကျွန်းက Foodie တို့အတက် နှစ်ခါစဉ်းစားစရာမလိုအောင်သွားစားကြည့်သင့်တဲ့ဆိုင်လေးများ
သင်္ဃန်းကျွန်းက အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် တွေဝေစရာမလိုဘဲ အပီအပြင်ဆွဲဖို့ ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေ လာပြောပေးတာဗျို့
ဆိုင်အကြောင်းလေးတွေကို တစ်ပုံချင်းစီအောက်မှာရေးထားပေးလို့ ၀င်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အချစ်ကလေးရေ…
11800 ကျပ်ထဲနဲ့ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ ဟော့ပေါ့ရော အကင်ရောကို အဝကြိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Grill & Chill ကိုသာဒိုးလိုက် ဘေဘီ..
စားချင်တဲ့ ဟော့ပေါ့၊ အကင် နဲ့ Side Dish တွေကို စာရွက်လေးပေါ်မှာ ခြစ်ပြီးမှာပေးရတယ်
ပြီးတော့ အကင်တွေဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကင်စရာမလိုဘဲ ဆိုင်ကစာဖိုမှူးတွေကိုယ်တိုင် ကင်ပေးတာဆိုတော့ တူးမှာကပ်မှာကြောက်စရာမလိုဘဲ အေးဆေးထိုင်စားနေရုံပဲ
နောက်ဆုံး သဘောအကျဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ အပြင်မှာဝယ်စားရင်တောင် ၄၊ ၅၊ ၆ထောင် ပေးရတဲ့ အမိုက်စားဟင်းပွဲတွေကိုပါ အဝစားလို့ရတာပဲ
အရင်ဆုံး ဟော့ပေါ့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင် သူ့မှာ အရည်အရသာက အချို/ အစပ်/ တုံယမ်း ဆိုပြီး ၃ မျိုးရတယ် ကြက်၊ ဝက်၊ ပုစွန်၊ ကင်းမွန်တွေနဲ့ အသီးအရွက်တွေဆိုရင် အမျိုးအစားပေါင်း ၃၀ လောက်ရှိတယ်
အကင်မှာဆိုလည်း ရေဘဝဲ၊ ဂဏန်း၊ ပုစွန်၊ ကင်းမွန်၊ ကြက်၊ ၀က်နဲ့ sausage အပြင်နောက်ထပ် အမျိုး ၂၀‌ လောက်ရသေးတယ်
Side Dish တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံးစားကြည့်စေချင်တာက ပုစွန်တုံယမ်း/ ငါးကချင်ချက်/ အပ်မှိုတန်ပူရာ/ ကြာစွယ်တန်ပူရာ/ ပုစွန်၊ဂဏန်းအစပ်ကြော်လေးတွေပေါ့ ။
အရမ်းစားလို့ကောင်းတဲ့ ဆူရှီတွေဆိုလည်း ၄၊ ၅ မျိုးလောက်ရသေးတယ်.. အချိုပွဲအတွက်ဆိုရင်တော့ အသီးနဲ့ အအေးဖျော်ရည်ရတယ်
ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင် 11800 Ks / 9850 Ks / 7850 Ks ဆိုပြီး Package ၃ မျိုးရှိတယ်.. ပါ၀င်တဲ့ Item တွေပဲ ကွာတာဆိုတော့ အကုန်စားအကုန်ကြိတ်နိုင်ရင်တော့ 11800 တန်လေးကအတန်ဆုံးပါနော်
Address : အမှတ် ၂/၂၅ သုမင်္ဂလာလမ်း အိမ်ယာ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် Opening Hour : 11:00 AM – 3:30 PM
3:30 PM – 4:30 PM(Break Time)
Phone : 09953304555
ဆိုင်ရဲ့ Profile အပြည့်အစုံကြည့်ရန် Link
မာလာရှမ်းကော နှင့် မာလာဒုတ်ထိုး
မာလာရှမ်းကောနဲ့ မာလာတုတ်ထိုးကောင်းကောင်းလေးတွေစားချင်တယ်ဆိုရင် သင်းပျံ့မွှေးကိုသာ သွားပလိုက် ၁၅၀၀၀ လောက်ဆိုရင် ၃ ယောက်လောက် အေးဆေးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ ဈေးကြီးတဲ့ထဲမပါဘူးရယ်
ပြီးတော့ သူ့ဆိုင်က မာလာအနှစ်က Ready made တွေကိုသုံးတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့အနှစ်ကိုပဲသုံးတာ
မာလာရှမ်းကောအတွက် ဈေးနှုန်းလေးတွေဆိုရင် အသီးအရွက် နဲ့ ရေစိမ် ဆို 100 g ကိုမှ 1000 Ks နဲ့ အသား/ ပင်လယ်စာ နဲ့ အသားလုံး တွေဆို 100 g ကို 2500 Ks ထဲရယ် ဂျုံခေါက်ဆွဲတစ်ခုကိုမှ 1000 ပဲ (သူ့ဂျုံခေါက်ဆွဲက တခြားဆိုင်တွေမှာမရဘူး ဒီဆိုင်မှာပဲရတာ)
Set လိုက်စားချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ် ပွဲသေး – 10000 Ks /ပွဲလတ် – 14000 Ks /ပွဲကြီး – 18000 Ks ပဲရယ်
သူ့ဆိုင်မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ မာလာတုတ်ထိုးဆိုတာကတော့ အရင်ဆုံးစားချင်တဲ့ တုတ်ထိုးတွေကို အရင်ရွေးရတယ် ပြီးရင် ပန်းကန်ဇောက်ဇောက်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ ရွေးထားတဲ့ တုတ်ချောင်းတွေကို မာလာအရည်လေးနဲ့ပြုတ်ပြီး လာချပေးတယ်
အရည်လေးသောက် တုတ်ထိုးလေးစား ရှယ်ပဲ ကြွေတာကတော့ အရည်ကဆီမများဘဲမာလာအရသာ‌နဲ့ သောက်လို့ကောင်းနေတာပဲ .. မာလာတုတ်ထိုးစားရင် သတိထားရမဲ့အချက်လေးက အနည်းဆုံး 15 ချောင်းတော့ရွေးရတယ် ဈေးကလည်း တစ်ချောင်းမှ 300 နဲ့ 500 ပဲရယ်..
နောက်ပြီး ဖက်ထုပ်ကြော်နဲ့ ကြက်သွန်မွှေးကြက်ခြေထောက်ဆိုတာလေးတွေလည်း စားလို့ကောင်းတယ် Delivery ဆိုရင်လည်း Deliverink, Food Mall, Yangon Door to Door, O2O တို့နဲ့ချိတ်ထားပါတယ်တဲ့
အော်…… ပြီးတော့ တပေါင်းလ Promotion အနေနဲ့ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ဖိုးပြည့်တာနဲ့ 15% Discount ထပ်လျော့ပေးအုံးမှာ ဆိုတော့ အရမ်းတွေ ပိုပြီးတန်နေတဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ အပြေးလေးသွားသင့်နေပြီနော် ..
Address : အမှတ် (A+B) ၊ မေဥယျာဉ်အိမ်ယာ၊ ရတနာလမ်း၊ ကျိုက္ကဆံဘုရားနှင့် မလိခအိမ်ယာကြား၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် Opening Hour : 11AM-9:30PM
Phone.No : 09258149068 / 09967088886
မန္တလေး Address: လမ်း ၃၀၊ ၆၆ × ၆၇ လမ်းကြား
Phone.No : 09458796688 / 09966955558
တောင်ကြီး Address : ည/၁‌၈၊ ညောင်ပင်သာလမ်း(ငြိမ်းချမ်းဟိုတယ်မျက်စောင်းထိုး)၊ ညောင်ဖြူစခန်းရပ်ကွက်
Phone.No : 09788880844 / 09898912223
လားရှိုး Address : အမှတ်(၂/၆/၁၅၁)၊ ဒေါနလမ်းနှင့် မြတ်လေးလမ်း၊ အ.ထ.က(၂) အပေါ်လမ်းထောင့်၊ ရပ်ကွက်(၂)
Phone.No : 09266612678
စပ် စပ် လန်
မာလာရှမ်းကောနဲ့ ရှူးရှူးရှဲရှဲအထောင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် သွားဆေးတက္ကသိုလ်နားမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ စပ်စပ်လန်ဆိုတဲ့ ဒီဆိုင်လေးက အမိုက်စားလေးဗျို့
ဈေးတွေကလည်း သင့်တင့်ပြီး အရသာကလည်းကောင်းလို့ တစ်ခါသွားစားကြည့်ပြီးရင် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားချင်နေမှာ……..
သူ့ဆိုင်မှာ စားလို့ကောင်းတာလေးတွေ ပြောပြရမယ်ဆိုရင်
ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ အရသာထိထိမိမိနဲ့ မာလာအနှစ်နဲ့ ချက်ထားတဲ့ မာလာရှမ်းကောကတော့ အရသာကောင်းရုံတင်မဟုတ်ဘူး ဈေးကလည်း တန် တန် တန် ပဲ
Seafood နဲ့တစ်ပွဲမှ ၆၀၀၀ ထဲရယ် ကြက်/ ဝက် အသားနဲ့ ဆိုရင် ၄၀၀၀ ပဲရှိတယ် တစ်ပွဲဆို ၂ ယောက်လောက်တော့ အေးဆေးဆွဲလို့ရတယ်
Signature အရသာနဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးထောင်းထားပေးတဲ့ စပ်စပ်လန်ထောင်း – ၃၀၀၀ ကျပ်
ငါးအကြွပ်ကြော်လေးကို မာလာအနှစ်လေးနဲ့ရောစပ်ပြီးချက်ထားတဲ့ မာလာငါး – ၆၅၀၀ ကျပ်
ပင်လယ်စာတစ်ပုံတစ်ပင်ကို ရှူးရှူးရှဲရှဲချက်ထားတဲ့ စပ်စပ်လန်ချက်ပင်လယ်စာ – ၁၂၀၀၀ ကျပ် လေးတွေကတော့ ရောက်ရင်စားကြည့်သင့်တာလေးတွေပါနော်
ရှူးရှူးရှဲရှဲလေးတွေစားပြီးရင် အချိုတည်းဖို့ အတွက် ရေခဲသုပ်/ Thai Tea/ Fresh Juice/ Soda နဲ့ Milk Shake လေးတွေလည်းရသေး
Address : Shop -1 အမှတ် (၆၁/ခ) သံသုမာလမ်း နှင့် အောင်ရတနာလမ်းထောင့် သွားဆေးတက္ကသိုလ် အနီး သုဝဏ္ဏ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း (သစ်စက် မှတ်တိုင်)
Opening Hour : 11:00 AM – 10:00 PM
Phone : No : 09- 899 888 302 , 09- 773 701 650
Address : Shop –2No. (A/3), Damadana Street, Myintta Nyunt Qut, Tamwe Township.
Phone.No : 09-660 068 111
Joker’s Thai & Chinese Restaurant
စိမ်းစိမ်းစိုစိုသစ်ပင်ရိပ်လေးတွေကြားမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းထိုင်ရင်း ထိုင်းစာနဲ့ တရုတ်စာလေးတွေကို ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင် Joker Thai & Chinese Restaurant ကိုသာသွား ..
ဈေးကလည်းမကြီးဘူး အများဆုံးမှ ၈၀၀၀ ၀န်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ် ဒီဆိုင်ရောက်ပြီဆိုရင်
ပဲပြား‌လေးတွေကို ကြက်ဥနဲ့စိမ့်နေအောင်ကြော်ပြီး ပဲပင်ပေါက်သုပ်‌ကို ပုံမှန်စားနေကျမတူဘဲ ပါးစပ်ထဲစွဲနေစေတဲ့ ပဲပင်ပေါက်ကြက်ဥပဲပြားသုပ် – 3000 Ks
ပဲကြာဆံ၊ဂျပန်တို့ဟူး‌၊ seafood တွေနဲ့ ရေညှိတွေကို ဟင်းရည်ပူပူလေးကိုစမ်းပြီး စားရတဲ့ ဂျပန်တို့ဟူးပဲကြာဆံဟင်းချို (Seafood) – 4000 Ks
ကြွပ်ရွနေအောင်ကြော်ထားတဲ့ ၀က်သုံးထပ်သားပြားလေးတွေကို သူ့ရဲ့ sauce လေးနဲ့တို့ပြီးစားရင် ရှယ်ကောင်းတဲ့ သုံးထပ်သားနှမ်းကပ် – 5000 Ks လေးတွေ က မဖြစ်မနေစားကြည့်သင့်တာလေးတွေပေါ့
ချဉ်စပ်လေးသုပ်ထားတဲ့ရေခူသုပ် ၊ နှစ် ၁၀၀ သီး ၊ အာလူးချောင်းကြော်လေးများများနဲ့ ငါးနီတူကြွပ်ကြွပ်လေးလေးတွေရဲ့အလယ်မှာ လက်ဖက်သားလေးပါအစစ်ထည့်ထားပေးတဲ့ အရသာ ၄ မျိုးအမြည်း – 5000 Ks နဲ့ ဘော်ဒါတွေစုပြီး ဘီယာလေးသောက်၊ ကော့တေးလေးတွေသောက်ရင်း Chill လုပ်ချင်ရင်လည်းရသေးတယ်
Delivery ဆိုရင်လည်း Door2Door, Food2U, Food Mall တို့နဲ့လည်း ချိတ်ထားသေးတယ်
Address : အမှတ် (E) ၊ ၁၀ဆ/ခ ရပ်ကွက် ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်
Opening Hour : 10:30 Am -11:00 Pm
Phone.No :09251234046 , 0925124045 , 09777530077 , 09699054048
သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ထဲက ဘတ်ဂျက်ဆိုင်လေးလို့တောင် ပြောလို့ရတဲ့ Z’n’Z Food & Drink
ဒီဆိုင်လေးက မာလာရှမ်းကော / ဟော့ပေါ့ ‌‌တစ်ပွဲကိုမှ ၄၀၀၀ ကျပ် ဝန်းကျင်ပဲရှိတာ ..
ဈေးတန်တန်လွန်းလို့ ကိုယ်အမြဲ စားဖြစ်နေကျဆိုင်လေးပဲ ..
ဒီဆိုင်လေးမှာက ..BBQ အကင်အစုံအပြင် .. မာလာရှမ်းကော / ဟော့ပေါ့ တွေကို Set နဲ့ရော .. Á La Carte နဲ့ရော ရတာမို့ ကိုယ်အကြိုက် ရွေးစားလို့ရတာ အားသာချက်ပဲ
– မာလာရှမ်းကော ရိုးရိုး Set ( ၄၀၀၀ ကျပ် )
– ကြက်/ဝက် ( ၆၀၀၀ ကျပ် ) / Beef ( ၇၀၀၀ ကျပ် ) / Seafood ( ၈၀၀၀ ကျပ် )
မာလာအထုံအစပ်ကို လိုသလိုပြောလို့ရပြီး .. အရသာက အစပ်အဟက်တည့်လွန်းလို့ စားလို့ကောင်းတယ် ..
Set နဲ့မှာပြီး Side Dishes ထပ်ပေါင်းချင်ရင် ( အသီးအရွက် ၄၀၀ ကျပ် ကစပြီး အသားတွေဆို ၁၂၀၀ ကျပ် ) ဝန်းကျင်ပဲ ရှိတယ်
ဟော့ပေါ့ အရည်က အချို / ချဉ်စပ် / မာလာ / တုံယမ်း ရွေးလို့ရပြီး .. Set လေးတွေက
Single Set ( ၄၄၀၀ ကျပ် ) / Couple ( ၇၇၀၀ ကျပ် ) အပြင် Family Special Set လေးတွေလည်း ရှိတယ်
Side Dishes အတွက်က အသီးအရွက်ဆို တစ်ပွဲ ( ၈၀၀ ကျပ် ) ကနေ အသား / seafood အစုံ အတွက်က ( ၂၅၀၀ ကျပ် ) ဝန်းကျင်ပဲ ရှိတယ်
တခြားရနိုင်တဲ့ အစားစာတွေက .. Appetizer / Soup / Salad / အထောင်း / ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးတွေ စုံနေအောင် ရသေးတယ်
သောက်ဖို့အတွက်က ဘီယာအပြင် .. Soda / Milk Shake / Smoothies / Hot Coffee တွေစုံနေအောင်ရတော့ အိုကေပဲ
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် : ( 11 AM ~ 11 PM )
ဆိုင်လိပ်စာ : အမှတ် 8/1 ၊ သံသုမာလမ်း ၊သုဝဏ္ဏ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ ( ပေါ်ဆန်းမွှေးမီးပွိုင့်နှင့် မင်းဒင်လမ်းကြားအလယ်လောက်)
ဖုန်းနံပါတ် : 09 – 772 747 417
‹ တောင်ဥက္ကလာပမှ အမိုက်စားဆိုငလေးများ
အစားတလိုင်းဘော်ဒါတို့အတွက် ရန်ကင်းတစ်ဝိုက်က Recommend ပေးချင်သော ဆိုင်လေးများ ›